I-China Sanitary Cam Rotor Pump QZ-Z yoMvelisi kunye noMthengisi | Qiangzhong
Iimpompo zeRotor ziyilelwe ngokukodwa ukuhambisa ngobunono kwe-viscosity ephezulu okanye izinto ezinepelete
Iyasebenza kwizihlandlo eziphilileyo nezinyumba. Ukuhamba ngesantya sononophelo, kodwa kunye neempompo zokulinganisa.
Ukuhamba kobalo lokuhamba kwempompo ye-rotor yokuhamba kwe-1
Ukuhamba kwethiyori kubhekisa kumthamo ophakathi ohanjiswe kwiyunithi yexesha ngexesha lokusebenza kwempompo ye-sanoror ngaphandle kokujonga ilahleko yokuvuza, ethi:
Ukuhamba kwethiyori = ukufuduka X isantya X ixesha 2. Ukuhamba okwenyani
Elona zinga lokuhamba kwemali lithetha ukuba impompo ye-sanoror yococeko ithathela ingqalelo ilahleko yokuvuza ngexesha lokusebenza, oko kukuthi, ukusebenza kakuhle kwevolumu. Ukusebenza ngokuvolumetric ngokubanzi kuphakathi kwama-80% nama-90%.
Okwenziweyo ukuhamba = ithiyori ukuhamba X kokusebenza kakuhle kwevolumu
Impompo yeButterfly Rotor:
Ngombulelo kwibhola lebhabhathane, linezibonelelo ezithile xa kudluliswa izinto eziphezulu ze-viscosity kunye nezinto ezinamaqhekeza amakhulu, kwaye zinokuhambisa ngokufanelekileyo izinto ezibonakalayo ze-viscous.
Ibhabhathane elingatshatanga lePompo yeRolor egobile:
Impompo yenzelwe ngokukodwa ukuhambisa amasuntswana amakhulu anezixhobo. Ubume bayo obukhethekileyo kunye nefom egobile yenza ukuba ibe yinto engafaniyo nezinye iimpompo xa uhambisa izinto ezinkulu. Inokuphepha ngokufanelekileyo ukuphuka kwamasuntswana ngexesha lokuhambisa izinto, kwaye yimpompo ekhethiweyo yokuhambisa izinto eziyimbudumbudu.
Ukhetho lweCandelo loThumelo:
• I-Motor + Fixed Ratio Reducer: le ndlela yokuhambisa ilula, isantya se-rotor sihlala sihleli, esikugqiba kwinqanaba lokuhamba alinakulungelelaniswa.
• I-Motor + Mechanical Fictionion Type Stepless Transmission: olu hlobo losasazo luhlengahlengiswa ngesandla ukufikelela kwisantya esiguqukayo. Ibonakaliswe ngokukhuselekileyo nangokuthembekileyo, i-torque enkulu, ukuhamba okungahambi kakuhle. Ukungancedi kulungelelwaniso oluzenzekelayo kunye nengxaki ngakumbi. Isantya kufuneka sihlengahlengiswe kwinkqubo yokusebenza, kwaye akufuneki sihlengahlengiswe phantsi kwemeko yokumisa. Nceda ujonge kwimiyalelo yomenzi wokusetyenziswa kunye neenkcukacha zokugcina.
• Isiguquli seMoto + esiguquliweyo: isantya sinokuhlengahlengiswa ngokuzenzekelayo ngale ndlela, oko kuthetha ukuba ukuhamba kunokuhlengahlengiswa ngokungenantambo. Uncedo kukuba inqanaba lokuzenzekelayo liphezulu kwaye isantya esine-torque sikhulu; Ukungathandeki kukuba ixabiso le-inverter liphezulu kakhulu. Nceda ujonge incwadana yemiyalelo yomenzi ngenkcukacha zolondolozo.
Impompo yeRoror inezinto ezimbini eziguqulweyo ezijikelezileyo (2-4 amazinyo).
Xa zijikeleza, kukho ukutsalwa (isithuba esivelisiweyo) esiveliswe kwindawo yokungena ukuze uncancise umbandela oza kuhanjiswa.
Ezi rotors zimbini zahlula igumbi eligudileyo laba ngamaqhekeza amancinci aliqela.
Esithuba, basebenza ngokulandelelana a → b → c → d.
Xa ndisebenza ukubeka i, ligumbi kuphela endizaliswe yimithombo yeendaba;
Kwindawo b, inxenye yendlela ephakathi ifakwe ngaphakathi kwigumbi B;
Kwindawo c, eliphakathi nalo lifakwe kwigumbi A;
Kwindawo d, Igumbi B kunye neGumbi A linxibelelana neCandelo II, kwaye amajelo eendaba adluliselwa kwizibuko lokukhupha.
Ngale ndlela, eliphakathi (izinto) lithunyelwa ngokuqhubekayo.
Le mpompo ye-cam lobe yimpompo yokudlulisa eyahlukeneyo esebenzisa i-lobe ezimbini, i-tri-lobe, ibhabhathane okanye i-rotor multilobe. Njengempompo yokuhambisa ivolumetric yococeko, ineempawu zesantya esisezantsi, imveliso ephezulu ye-torque, ukumelana nobushushu obuphezulu, ukumelana ne-corrosion, njl njl. Inkqubo yayo yokuhambisa igudile kwaye iyaqhubeka, kwaye inokuqinisekisa ukuba iipropathi ezibonakalayo zezinto ezaphukileyo azophulwanga ngexesha lokuhambisa, kwaye i-viscosity yezinto ezinokuhanjiswa zinokufikelela kwi-CP ye-1,000,000.
Egqithileyo Icebo lokucoca ulwelo lomoya
Okulandelayo: Itanki yokutsala ikofu
Zokuvala Pump Centrifugal Pump
Ucoceko lweComputer Centrifugal Pump
Impompo yoXinzelelo lweSanitary Negative
I-JM-F Split Colloid Mill (indawo exande uxande)
Uluhlu olulodwa lwe-Oval ephezulu yokuxuba itanki
Uluhlu olunye lweTanki lokuxuba
Imiba ngemiba yokusebenza Ukukhutshwa kwetanki